Playwright Rick Shiomi ayaa loo yaqaan 'McKnight Artist Artist'
Sawir: Lia Chang
Machadka McKnight Foundation wuxuu magacawday Minnesota playwright, agaasime, soo saaraha, masraxa riwaayadaha, iyo muusikada Rick Shiomi oo ah fanaankii 2015 ee McKnight, oo ah aqoonsi farshaxan heer sare ah oo afar sano ah. Hadda sanadka 18aad, sharaf sanadeedka waxaa ka mid ah $ 50,000 abaal-marin lacageed oo aqoonsanaya farshaxan-yo shakhsiyadeed ee Minnesota kuwaas oo sameystay tabaruc aad u muhiim u ah tayada nolosha dhaqanka ee gobolka.
"Marka la eego ballaadhinta, baaxadda, iyo muhiimada Rick Shiomi ee farshaxanka farshaxanimada, ma jiro wax xuduud ah oo lagu cabbiro saameynta," ayuu yiri madaxweynaha McKnight Kate Wolford. "Waa wax aad u fara badan, raadraac ah, oo si fiican u ballaarinaya isaga oo ka go'nay ballanqaadkiisa Tiyaatarka Aasiyaanka Ameerika ee Twin Cities, annaga McKnight ayaa sharaf u ah inuu u dabaaldego guulaha uu ku gaaray abaalmarintan."
Hogaamiyaha maskaxda ah ee dhaqdhaqaaqa Aasiyaanka Ameerikaan tan iyo 1980-tameeyadii, Rick Shiomi ayaa soo qoray, soo saaray, ama lagu faray in ka badan 50 ciyaarood intii lagu jiray xirfadiisa. Waxa laga yaabaa inuu yahay midka ugu wanaagsan ee loo yaqaan aasaasaha St. Paul's Theatre Thu, oo u heellan inay keenaan codadka Aasiya Ameerika. Shiomi waxa uu aasaasay Masraxa Mu'annada 1992-kii, wuxuu ahaa nashqad farshaxan oo laga soo bilaabo 1993 illaa 2013. Intii uu hoggaankiisa, Thaaga Muusigga wuxuu noqday Muunad Farshaxanka wuxuuna ka koray bilawga yar ee degaanka aaska Aasiyaanka Ameerikaan ku dhawaadan ku jirin shirkad qaran ahaan loo aqoonsan yahay. (Magaca ururku wuxuu ka yimid Kuuryaka oo ah dabeecadda Shiinaha ee shaman / farshaxan / dagaalyahan oo isku xira samooyinka iyo dhulka iyada oo loo marayo geedka nolosha.)
Shiomi waa abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Nolosha Nolosha (2012), Sally Ordway Irvine Award for Vision (2007), iyo Golaha Minnesota ee loogu talagalay abaalmarinta Award for Leadership (2002). Ciyaartiisa ayaa lagu daray sheekooyinka Aasiyada Aasiya waxay u ciyaari doontaa New Generation(Jaamacadda Temple Press, 2011), oo uu isku-dubariday, iyo Ereyada Hadalka: A Century of Asian Aasaasida American, ayaa waxaa sameeyay edebay Rajini Srikanth iyo Esther Iwanaga (Rutgers University Press, 2001). Waxa lagu soo bandhigay qodobka January 2009 Magazine Masraxa Mareykanka, faafinta farriinta ugu sareysa ee tifaftirka tiyaatarka Mareykanka. Dhinaca riwaayadaha, Shiomi shaqadiisa waxaa ka mid ah abaalmarinta abaalmarinta Xummad Jaale ah, kaas oo laga soo saaray-Broadway, oo ku yaalla Waqooyiga Ameerika iyo Japan; waxaa la guddoonsiiyay abaalmarinta tartanka "Critics Theater Circuit Theatre Circuit Critics" ee loogu talagalay cayaaraha cusub ee 1982; iyo in dib loo eego dib u eegista New York Timesiyo New Yorker. Waxyaabaha kale ee cajiibka ah waxaa ka mid ah Kubad ciyaara, Cafis Rosie, Walleye Kid, Maskaxda ciyaartaiyo Safarka Drum. Agaasimuhu wuxuu si aad ah u shaqeynayay Mu'aamaradda Mu'assasadda, halkaas oo ay ku jiraan deymaha Macbadka Riyadaby Marcus Quiniones, Song of Pipa(kaas oo uu sidoo kale qoray), wax soo saarka Aasiyada-inspired Habeenkii Habeenkii Midsummer, iyo nooca David Hwang ee Rodgers iyo Hammerstein Song Flum Song. Doorashadiisa uu ku soo bandhigay ciyaaraha qoob ka cayaarka masraxa muusikada Mareykanka - oo ay ku jiraan A Night Music Music, Guryaha dhexdooda, iyo Boqorka iyo aniga- Waxay bixiyeen fursado naadir ah oo horay u socota oo loogu talagalay dadka jilicsan ee Asia si ay u qabtaan doorarka guud ahaan iyaga oo aan la heli karin.
Shaqadiisa waxaa lagu soo bandhigay gudaha Guthrie, Intermedia Farshaxanka, Daadinta Dabka, Ordway, Meelaha Park, Marxaladaha, Koonfurta, iyo tiyaatarada SteppingStone, iyo kuwo kale; Shirkadda Tiyaatarka Aasiyada Asiya (San Francisco), East West Players (Los Angeles), Tiyaatarka Interaika (Philadelphia), Pan Asia Repertoire (New York), iyo Theater Esprit Asia (Denver); iyo caalam ahaanba Masraxa Firehall ee Vancouver iyo Shirkadda Tiyaatarka Haisho iyo Shirkadda Tiyaatarka Ryuzanji, labadaba Tokyo.
Wuxuu ku dhashay kuna koray Toronto, aragtida Shiomi sida Japan oo ah jaanisyo Canadian ah oo si caan ah uga dhexmuuqday farshaxanka iyo nolosha. Waalidiintiisa waxay ka mid ahaayeen dad badan oo reer Canadian ah oo ka soo jeeda degaanka Japan oo lagu qasbay in ay galaan xeryaha caalamiga ah intii lagu jiray Dagaalkii Dunida II; waayo-aragnimadooda xerada waa mawduuc xoog badan oo ku saabsan shaqooyinka badan. Shiomy wuxuu ka qalin jebiyey Jaamacadda Toronto oo uu ka soo qalinjebiyey taariikhda 1970-kii, wuxuu helay shahaadad waxbarid oo ka timid Jaamacada Simon Fraser University, waxaana uu ku sii socday adduunka, barashada Japan iyo Hong Kong ka hor inta uusan ku laaban Canada, waqtigan xaadirka ah ee Vancouver, British Columbia. Vancouver, wuxuu ka caawiyay qabanqaabinta Bandhiga Powell Street, wuxuu diyaariyay filim loogu talagalay in uu baro ilmaha taariikhda Kanadiyaanka Japan, wuxuuna noqday xubin firfircoon oo ka tirsan Ururka Muwaadiniinta Canadian Canadian Citizen's Association, halkaas oo uu ka caawiyey Bariis aan la saari Karin: Shiineyska Shiinaha & Japan ee Canadianka(Shiineeyska Shiinaha ee Shiinaha, 1973). Waxay ahayd waqtigaan oo uu kula kulmay David Henry Hwang iyo Philip Kan Gotanda, oo labaduba ay ahaayeen kuwo ku dhex jira horumarinta farshaxanka.
Shiomi waxay heshay mashaariic kala duwan, muraayado, shirar iyo dabbaaldegyo, oo ay ka mid yihiin wadashaqeyn la sameeyey Ururada Asxaabta Maraykanka iyo Tifaftirayaasha (CAATA), oo ah hay'adda adeegga qaran ee bulshada masraxa Maraykanka ee Aasiya, halkaasoo uu ka shaqeeyey guddiga 2006 illaa 2014. Waxa uu ka shaqeeyey Guddiga Farshaxanka Gobolka Minnesota, Isgaarsiinta Tiknoolajiyadda iyo NEA-da iyo 2014-kii ayaa la siiyay deeqda Doris Duke ee Barnaamijka Dhisida Barnaamijka Farshaxanka si ay ula shaqeeyaan Tiyaatarada InterAct iyo Asia Arts Initiative si loo horumariyo masraxa Aasiyada Asiya iyo dhagaystayaasha Philadelphia. Meel kale oo muhiim ah oo ka mid ah shaqada farshaxanka ee Shiomi waa Mu Daiko, oo ah koox mashquul ah oo ka tirsan Munaasabada Mu'assasada ee 1997-kii. Wuxu ahaa hogaamiyaha Mu Daiko ilaa 2010, tababbarbiyeyaashiisa, muusikada taiko muusikada ah iyo hogaaminta bandhigyada sannadlaha ah ee goobaha kala duwan ee Minnesota .
The McKnight Award Artist Award wuxuu aqoonsadaa shakhsiyaadka ka caawinaya aasaaska aasaaska nolosha dhaqanka ee Minnesota. Inkasta oo ay fursado ay u shaqeeyaan meelo kale, waxay doorteen inay joogaan - oo ay sii joogaan, waxay sameeyeen isbeddel. Qofka horay u soo qaata waa muusikada 'Dominick Argento' (1998), farshaxanka farshaxanka Warren MacKenzie (1999), qoraaga Robert Bly (2000), weriye daaliye Dale Warland (2001), sawirqaade Emilie Buchwald (2002), riwaayad Mike Lynch (2003), kormeeraha Orchestra Stanislaw Sawirqaadaha oo la yiraahdo Skriveaczewski (2004), sculptor Judy Onofrio (2005), farshaxanka tiyaatarka Lou Bellamy (2006), sawirqaade Kinji Akagawa (2007), qoraa Bill Holm (2008), farshaxanka tiyaatarka Bain Boehlke (2009), sawirqaadaha Siah Armajani (2010) farshaxanka Ranee Ramaswamy (2011), gabayada John Caddy (2012), farshaxanka masraxa Wendy Lehr (2013), iyo farshaxanka masraxa Sandy Spieler (2014). McKnight ayaa sharaf u noqon doona Shiomi xaflad qaas ah kadib sanadkan.
Machadka McKnight wuxuu doonayaa inuu hagaajiyo tayada nolosha ee jiilalka hadda iyo mustaqbalka. Waxaa la aasaasay sannadkii 1953, waxaana madaxbannaanaa William iyo Maude McKnight, oo ah hay'ad Minnesota ku salaysan oo hanti ku dhow qiyaastii $ 2 bilyan oo lagu siiyay $ 86 milyan sannadka 2014-ka. Guud ahaan, in ka badan $ 9 milyan oo doolar ayaa udubdhexaadiyay fanaaniinta shaqada si loo abuuro loona hormariyo bulshooyinka firfircoon , sababtoo ah Minnesota wey weyday marka ay farshaxannadu sii fiicnaato.
XIRIIRKA LAGU XUSAYO
Mudaaharaadayaasha Farshaxanka Rick Shiomi ayaa ku guuleystay abaalmarinta McKnight ee ugu sareysa, Star Tribune
McKnight wuxuu sharfayaa Muusikada Muusigga 'Rick Shiomi, Reedyowga Dadweynaha ee Minnesota
Rick Shiomi ayaa ku guuleystey abaalmarinta Farshaxanka Faneed ee 'McKnight' Tiyaatarka Mareykanka
Aasaasaha Muusigga Farshaxanka Rick Shiomi ayaa helay maamuus sare McKnight, Pioneer Press
Rick Shiomi wuxuu ku guuleystay abaalmarinta farshaxanka 'McKnight' Twin Cities Day Planet
Rick Shiomi wuxuu helay abaalmarinta abaalmarinta sanadka 2015, Backstage Gudbaa Lia Chang
Rick Shiomi Magacaabay 2015 McKnight Kacsanaanta Farshaxanka, Philanthropy News Digest
Rick Shiomi oo u dhashay Japan-Canadian Canadian wuxuu helay abaalmarinta abaalmarinta sanadka 2015 ee McKnight, Guryaha Georgia